Daawo: Maxay ka wada hadleen c/wali gaas iyo Isimada, Nabadoonada iyo Waxgaradka Gobolka Mudug?? – Kismaayo24 News Agency
Daawo: Maxay ka wada hadleen c/wali gaas iyo Isimada, Nabadoonada iyo Waxgaradka Gobolka Mudug??
by Tifaftiraha K24 1st May 2017 075
Madaxweynaha Maamulka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 01 May 2017 magaalada Gaalkacayo kulan muhiima kula yeeshay maamulka gobolka Mudug, kan degmada Gaalkacayo, Isimada, nabadoonada iyo waxgaradka gobolkaasi.
Kulanka ayaa waxaa madaxweynaha ku wehelinaayey masuuliyiinka tirsan golaha wasiirada Puntland, maamulka gobolka Mudug, kan degmada Gaalkacayo, saraakiil ka tirsan madaxtooyada dawladda Puntland, Saraakiisha ciidamadda gobolka Mudug, nabadoonada iyo waxgaradka gobolkaasi, urrurada haweenka iyo kuwa dhalinyarada.
Madxweynaha Puntland oo ka hadlay kulan ka ayaa sheegay waajibaadka koowaad ee saran dawladda uu yahay inay ilaaliso oo difaacdo qofka muwaadinka ah nabadiisa, maalkiisa, naftiisa iyo sharaftiisa, waxaana uu xaqiiyey madaxweynuhu in lakala leeyahay masuuliyadaasi oo ay marka hore leeyihiin gobolka, degmada iyo laamaha amaanka, isla markaana wixii ka taf dheeraada ay la wadaaqaan dawladda dhexe.
‘’ Maxaa ka saran amniga oo masuuliyada dadka shacabka ah? Waxaa ka saaran 1) dadku marka ay xaaladan oo kale ku jiraan oo degaan ahaan meshaad ku talaan, colaada jirata, dhibka ka jira ee aad la wadaagtaan Soomaaliya oo dhan waxaa la rabaa dadku inay la filyihiin wacyiga ay ku jiraan, xaalada aad ku sugan tihiin maadaama ay xaalad amni daro tahay waxaa laydin ka rabaa inaad ahataan dad ku baraarugsan amniga’’ ayuu yiri Madaxweynuhu.
Madaxweynaha Puntland ayaa hoosta ka xariiqay in dawladda Puntland iyo shacab keedu ay diyaar u yihiin nabad, isla markaana walaalahooda la deriska ah ay doonayaan inay nabad kula nooladaan, waxaan uu sheegay in Puntland ay diyaar u tahay nabad hadii ay wax kale doonayaana ay iyana nabad diyaar u tahay.
Dhinaca kale Madaxweynaha Puntland ayaa tibaaxay in dhismaha garoonka diyaaradaha Gaalkacayo ay ku baxayso kharash ka badan ‘’50 million’’, waxaana uu ugu baaqay shacabka magaalada Gaalkacayo in lagala shaqeeyo shirkada CCECC hirgelinta iyo dardargelinta dhismaha Garoonka.
Ugu danbayn, Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa Alle SWC uga mahad celiyey raxmadiisa uu u shubay ummadiisa, waxaaana uu xaqiijiyey in dawladda Puntland ay diyaar u tahay garab istaaga dadka dhibaataysan caawintooda, xoolayntooda iyo wax qabadkoodaba.
Daawo: Muxuu kusoo dhamaaday kulankii dhexmaray wasiirka arimaha dibadda jarmalka iyo ra’isul wasaare kheyre??
DEG DEG+Dhageyso: Dagaal xoogan oo la isku qorax dhacsaday ayaa hada waxa uu ka soconaya deegaano ka tirsan gobolka……
Muuqaal: Daawo Halkuu Marayaa Dhismaha Jaale Siyaad Hospital Garbahaarey
admin 13th March 2016
Beel Cabasho ka Muujisay Saamigigii ay ku Leheed Aqalka Sare ee Jubaland
Nickolas Kay oo ka hadley Mooshinka Madaxweyne Xassan, sheegeyna…………
admin 9th May 2014 28th August 2015